Ụbọchị My Pet » Ị Dị Njikere mehie Iji A Pet?
emelitere ikpeazụ: Jul. 10 2020 | 2 min agụ
Ihe m chọpụtara mgbe ke mahadum bụ ego nke ndị m maara na ịzụ na / ma ọ bụ n'ịkpa anu ulo. M nwere ndị enyi na enyi na-enweta ihe niile dị iche iche nke anu ulo ha n'oge ha afọ nke post-abụọ mmụta-nwamba, nkịta, nnụnụ, azụ, rabbits, hedgehogs na ọbụna ite afọ pigs.
Ọ pụrụ iyi ihe na-adọrọ adọrọ nnọọ na-agba ọsọ ma na-a Pita ma ị na-eche echiche nke nkwa nke na-abịa, ya na a Pita? Ee, gị Pita na ịhụnanya unu unconditionally na-adị n'ebe ahụ ị n'oge niile elu na lows ná ndụ, ma ha na-eme na-achọ nnọọ a bit nke na-elekọta. Ebe a na-a ole na ole Atụmatụ-enyere gị aka ikpebi ma ọ bụrụ na ị dị njikere:
Anu ulo na a ego nkwa
Ụfọdụ anu ulo pụrụ ịbụ ala na-eri na ụfọdụ anu ulo nwere ike na-amalite mgbe a ala na-eri ma nwayọọ nwayọọ na-eri gị a obere uba. N'ime afọ, nkịta m anọwo pụtara mfe mmezi. Ọ bụ ya bụ obere nkịta, N'ihi ya nri oriri obere ahụ ma ọ adịkarịghị nwere ileta pụọ. Otú ọ dị, ọ bụ ihe fọrọ nke nta 15 ma ugbu a, agadi na-arịa ọrịa. Ya ọgwụ na-eri ihe na ogwe aka na a ụkwụ kwa ọnwa. Dị ka ụmụ mmadụ na-, ụmụ anụmanụ na-arịa ọrịa n'agbanyeghị afọ ole ma ọ bụ ndụ. Ị nwere ike imeli shei si ego, nakwa dị ka oge maka gị Pita? Nke a bụ ihe dị mkpa ka a ga-atụle.
Anu ulo na a oge nkwa
Ezie na ụfọdụ anu ulo a sịrị na "ala mmezi" ha ka kwesịrị oge ụfọdụ akanamde ha na kwa ụbọchị. Nri, ejiji na ihe omumu bụ nanị ihe ole na ole tụlee ihe mgbe ọ na-abịa kwa ụbọchị na-elekọta a Pita. Ọ bụrụ na ị na-mgbe niile-ejegharị ejegharị ma ọ bụ iwepụtakwu oge n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ọrụ ahụ n'ụlọ, o nwere ike ịbụ ezi echiche iji zuola na-a Pita ruo oge. Ọ pụrụ ịghọ a ibu arọ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-mgbe niile na-arịọ ha ka ha ịzụ-anọdụ ụmụ anụmanụ gị mgbe ị na-anọghị. Ma eleghị anya, mgbe ndụ gị-aghọ ndị ọzọ biri ga-praịm oge iji nweta a Pita.
Anu ulo na a ogologo oge nkwa
Ezie na a Pita nwere ike kwado gị si ebi ndụ ugbu a, ha ga-esote afọ? Na 5 afọ? Na 10 afọ? M na-aghọta na ọchịchọ na-a Pita, ma ịnakwere na anụmanụ ndị a ruo ogologo oge nkwa dị mkpa. Ọtụtụ ndị m maara na ndị nwere anu ulo nwere inye ha mgbe e mesịrị na-agbada n'ụzọ ahụ n'ihi na ha apụghịzi elekọta ha. Ha nwere na Pita nọ na ụlọ akwụkwọ ma mgbe ha gụsịrị akwụkwọ na kwaga a ọhụrụ obodo ma ọ bụ na ulo na-enweghị ike ha Pita na ha. Ọ bụ mkpebi ọ dịghị onye chọrọ ka, enwe na kpọwaa na ha ha hụrụ n'anya Pita, ma nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide. Yiri oge nkwa, ikekwe ị kwesịrị ị na-echere ruo mgbe ndụ gị bụ obere obere gbalụ gbalụ.
Ya mere, tupu ị na-aga ma na-azụlite a Pita, na-eme gị nnyocha na-eche banyere gị atụmatụ maka ọdịnihu. Lee n'ime ụdị nke Pita na ị chọrọ, ihe a chọrọ iji n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-elekọta ha ma na ọ bụrụ na ndị chọrọ dabara gị ugbu a si ebi ndụ. Ọ dịghị ihe na-ezighị ezi na-egbu oge na-a Pita ruo mgbe unu njikere, n'ihi ya, anaghị ọsọ a mkpebi.
Olee otú Iji Were gị Nzọụkwụ Ndị Mbụ Na Online dịwara